Introduction of Hand Written Number Recognition Project – PYROBOCITY
ကျွန်တော် Japan နိုင်ငံကို အလည်သွားတုန်းက GMO Internet Company ကို သွားရောက်လေ့လာဖြစ်တယ်။အဲ့တုန်းက ကျွန်တော့်ကို Booking number ဖြည့်ခိုင်းတော့ ဒီ Tutorial ထဲကလို numberတွေကို ရေးထည့်လိုက်တာနဲ့ recognize လုပ်ပြီး database ထဲသွားရှာတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ့ရတော့ အရမ်းကြီး မခက်ခဲပေမယ့် ဒါမျိုးပုံစံမျိုး program ရေးချင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ အဆင်ပြေအောင် ဒီ Tutorial လေးရေးဖြစ်သွားတာပါ။
Hand Written Number Recognition ဆိုတဲ့ Practical Projectမှာ
ကျွန်တော်တို့ ဒီpost မှာတော့ HTML5 canvas ကို သုံးပြီး numberတွေ ဆွဲလို့ရအောင် နည်းလမ်းပြပေးမှာပါ။
2. Preparing Django web framework for this project
ဒီပို့စ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ python web framework ဖြစ်တဲ့ Django ကို ဒီ projectအတွက် settings တွေ Setup တူတူလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Using Django Rest Framework for getting Data
ကျွန်တော်ဒီပို့စ်မှာတော့ django rest framework ကို မိတ်ဆက်ပေးပြီး basic api တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ canvas က နေ ပို့လိုက်တဲ့ data တွေကို ဒီ api ကနေဖမ်းပြီး Recognize လုပ်ရမှာပါ။ဒီအဆင့်မှာတော့ data ကိုရယူပုံကို ပဲ ပြပေးမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ နောက်ပိုင်းပို့စ်တွေမှာလဲ ဒီ frameworkကို အသုံးပြုနည်းတွေ ပြပေးမှာမို့လို့ တစ်ခါတည်းမိတ်ဆက်ပေးတာပါ။
4. Training Mnist dataset
Mnist dataset က လက်နဲ့ရေးထားတဲ့ digits တွေကို စုပေးထားတဲ့ datasetပါ။ကျွန်တော်တို့ ဒီအဆင့်မှာ machine learningကို အသုံးပြုပြီး တူတူ data တွေကို trainကြရမှာပါ။
ဒီ အဆင့်ထိ ကျွန်တေ်ာနဲ့ တူတူပါလာရင်တော့ တော်တော်ဝမ်းသာမိမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ ဒီအဆင့်မှာတော့ အားလုံးကိုပေါင်းပြီး Final appကိုရေးမှာပါ။
Tag:computer vision, machine learning, practical projects
ကျွန်တော်ဒီtutorial လေးကိုရေးဖြစ်သွားတာက game ကစားနေရင်းနဲ့ ငါ့blog reader တွေလဲ ဒါမျိုးလေးသိချင်မယ်ထင်လို့ပါ။အဲ့တော့ ဒီနေ့မှာ color bubble လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ game လေးကို computer vision beginners တွေအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီ tutorial မှာ သုံးသွားတာတွေကတော့ Opencv-for image processing Dlib-facial landmark detection ကျွန်တော်တို့ video ကို ကြည့်မယ်ဆို နှာခေါင်းပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းဆွဲထားတာတွေ့ရမှာပါ။အဲ့လို နှာခေါင်းဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတာသိဖို့ dlib ကိုသုံးရပါတယ်။dlib သည် ဒီထက်အသုံးဝင်တာအများကြီးပါ။facial …